प्रचण्डका कारण कुलमान घिसिङ ठूलो टेन्सनमा ! - Thulo khabar
प्रचण्डका कारण कुलमान घिसिङ ठूलो टेन्सनमा !
काठमाडौ : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डका कारण आज दिँउसो देखीनै नेपाल विधुत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ टेन्सनमा परे ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डले ठूलो लडा’इ गरेर नेपाल विधुत प्राधिरकणको नेतृ’त्वमा कुलमानलाई स्थापित गराए तर आज प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा पटक बत्ती गए पछि कुलमानले समेत खप्की खानु परेको छ ।
अखिल क्रान्ति’कारीको सम्मेलनमा आज काठमाडौँमा प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने क्रममा दुइ पटक झ्याप झ्याप बत्ती गएको थियो । बोल्दा बोल्दै बत्ति गए पछि पोडियम बाट कुदेर प्रचण्ड सोफामा गएर बसेका थिए । सहभागीहरुले कुलमानको पारा के हो भन्दै्र खास’खुस गरेका थिए ।
प्रचण्डले सम्मेलनको सम्बोधन गरिरहँदा हलभित्र अ’चानक वत्ती गयो । बत्ती गएपछि उनी अता’लिए ।सम्मेलनस्थलमा अन्ध’कार भयो । वत्ती गएपछि प्रचण्ड हतार हतार ड्यास छाडेर सोफामा बस्न पुगे । एकपछि होहल्ला भयो । प्रचण्ड वत्ती आउँदा बसिरहेको देखिए ।
त्यसपछि उनी पुनः बोल्न थाले । पछिल्ला दिनमा काठमाडौंलगायतका शहरहरुमा वत्ती बेला बेलामा जान थालेको छ । केही स्थानमा लामै समय वत्ती जान थालेको छ ।
प्रचण्डले पार्टीका नेताहरुको क्रान्तिकारी चरित्र स्खलित हुँदै गएको बताएका छन्। अखिल क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार काठमाडौंमा सम्बोधनका क्रममा प्रचण्डले यस्तो भनेका हुन्। ’हामीले जनताको भावनाको प्रति’निधित्व गर्दै मौलिक क्रान्ति ग¥यौँ।
तर अहिले हाम्रो क्रा’न्तिकारी चरित्रमा ह्रा’स आएको छ’, उनले भने, ’हाम्रो क्रान्तिकारी कार्यशैलीमा स्खलन भएको छ। हामी विस्तारै विस्तारै जनयुद्ध र जनआन्दोलनलाई भुल्दैछौँ।’
उनले हिजो प्रतिगामीहरुले आन्दो’लनकारीलाई द’बाउन खोज्ने जस्तै अहिले माओवादी नेता कार्यकर्ता पद र पैसाको लोभमा फस्दै गएको बताए। ’हामी अहिले पद, पैसा, कमि’सनको लोभमा फसेका छौँ,’
उनले भने, ’द’लाल पुँजी’पतिहरुसँग बढी नजिक हुने भएका छौँ। हिजो जनयु’द्धका कुरा त विस्मृतिमा पो पुगे। आज जो जति माथि पुगे, त्यति नै बडो अवस’रवादी निस्कि’ए। जो मन्त्री भयो त्यो पत’न भएर गयो।’
उनले माओवादीमा उच्च पदमा पुग्नेहरु दलाल बनेको पनि दाबी गरे। ’जो जति माथि आयो त्यो दला’लसँग लाग्यो। हामी पनि उनै मान्छे छौँ’, उनले भने, ’म जनयु’द्धको पनि क’माण्डर, शान्ति प्रक्रियाको नेता हो। तर म पनि हेर्दा हेर्दै बिग्रि’ए जस्तो लाग्दैछ।’
दाहा’लले हिजो जनयु’द्धमा ल’डाइँका क्रममा म’र्न तयार भएर अ’ग्रसर हुनेहरु आज पदको लोभमा फसेको बताए। ’हिजो मलाई मोर्चा मर्न पठाउनु, मर्न तयार छु भनेर रोज्नेहरु, लड्न जान पाइएन,
मर्न जान पाइएन भन्ने हामी आज बि’ग्रियौँ’, उनले भने, ’ अहिले पद पाइएन, पैसा पाइएन भनेर रुने भयौँ। मन्त्री पाइएन भने। रुने भयौँ। हामीले थाहै नपाई सहिद परिवारलाई भुल्यौँ, जनयु’द्ध बिर्सियौँ।’-ओटिभी नेपाल